ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံနှင့် DAP တောင့်တင်းစက်များအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောအလျားလိုက် Cage မြေသြဇာစက်စက်။ | YiZheng
groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက်
Chain Plate ဆွေး Turner စက်
Crawler ဟိုက်ဒရောလစ်ဆွေး Turner
ဟိုက်ဒရောလစ် Lifing Comost Turner
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်
Self-propelled ဆွေး Turner စက်
Rotary စည်ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ Granulator
Disc အော်ဂဲနစ် & ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator
အမျိုးအစားအမျိုးအစားအော်ဂဲနစ် & ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာကြိတ်ခွဲစက်
အမျိုးအစားအမျိုးအစားအော်ဂဲနစ် & ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator စက်
ပြားချပ်ချပ် Extrusion granulator
နှစ်ကြိမ်ဝက်အူ Extruding Granulator
ကြိတ်ခွဲစက်ကိုအသုံးပြုပြီး semi-wet Organic Fertilizer ပစ္စည်း
ဒေါင်လိုက် Chain ဓာတ်မြေသြဇာစက်
ဓာတ်မြေသြဇာယူရီးယား Crusher စက်
နှစ်ဆ Shaft ဓာတ်မြေသြဇာရောနှောစက်
ဓာတ်မြေသြဇာအခြောက်ခံစက် & Cooler စီးရီး
ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်ယူခြင်းအတွက် Rotary လူပျိုဆလင်ဒါခြောက်သွေ့စက်
Rotary ဓာတ်မြေသြဇာ Coating စက်
ကောင်တာ Flow Cooling Machine
linear တုန်ခါမှု Screener
အိတ်ဆောင် Mobile Belt Conveyor
ကြီးမားသော Angle ဒေါင်လိုက် Sidewall Belt Conveyor
Extruding အစိုင်အခဲ - အရည် Separator Extruding ဝက်အူ
ဒေါင်လိုက် Disc ရောနှောလမ်းခွဲစက်
နှစ်ဆ Hopper အရေအတွက်အရေအတွက်ထုပ်ပိုးစက်
အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာလှည့်လည် Polishing စက်
static ဓာတ်မြေသြဇာ Batching စက်
ရှို Sieving အစိုင်အခဲ - အရည် Separator
တန် ၂၀၀၀၀ အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
တန် ၃၀၀၀၀ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Disc Granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
တန် ၅၀၀၀၀ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိသည့် Extrusion Compound Fertilizer ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
တန် ၂၀၀၀၀ ပေါင်းစပ်သောဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
တန်ချိန် ၅၀၀၀၀ ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ဒေါင်လိုက် Chain ဓာတ်မြေသြဇာကို C ...
အမျိုးအစားအသစ် Organic & Com ...
Rotary Drum ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ ...
The ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအိတ်လှေစက် အော်ဂဲနစ်ဓာတ်သတ္တု၊ ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်ကြိတ်ခွဲခြင်းများတွင်ဒီဇိုင်းဆွဲ။ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုရမည်။ ၎င်းသည်ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအမျိုးမျိုးကို ၆% အောက်အောက်တွင်သိုလှောင်နိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်မာကြောသောပစ္စည်းများအတွက်ဖြစ်သည်။
The ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအိတ်လှေစက် အလတ်စားအလျားလိုက်လှောင်အိမ်ကြိတ်စက်ပိုင်။ ဒီစက်သက်ရောက်မှုကိုနှိမ်နင်း၏နိယာမအရသိရသည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အတွင်းနှင့်အပြင်အိတ်များသည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ရာသို့လှည့်သောအခါ၎င်းပစ္စည်းသည်လှောင်အိမ်၏သက်ရောက်မှုကြောင့်အတွင်းမှအပြင်သို့အရှိန်လျော့သွားသည်။ လှောင်အိမ်အတွင်းကြိတ်ခွဲစက်တွင်ရိုးရိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ကြိတ်ခွဲမှုမြင့်မားမှု၊ ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊
The ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအိတ်လှေစက် ကြွက်ဘီးအုပ်စု၊ မောက်ဘီးအုပ်စုနှင့်လျှပ်စစ်မော်တာနှစ်ခုတို့ပါဝင်သည်။ အလုပ်လုပ်သည့်အခါမော်တာသည်လှောင်အိမ်ကြီးကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။ အခြားမော်တာတစ်ခုသည်လှောင်အိမ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ရန်လှောင်အိမ်ငယ်ကိုမောင်းနှင်သည်။ ပစ္စည်းသည် Hopper မှတစ်ဆင့်အတွင်းပိုင်းမောက်ဘီးဘောင်ထဲသို့ ၀ င်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်လှည့်သံမဏိဘားသည်ထပ်ခါတလဲလဲသက်ရောက်မှုရှိပြီးချိုးဖဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေသည်။
(၄) ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှု၊ သန့်ရှင်းရေး၊
မြန်နှုန်း (r / min)
စွမ်းရည် （t / h）
၁၁ + ၁၅
၁၅ + ၂၂
ရှေ့သို့ ဓာတ်မြေသြဇာယူရီးယား Crusher စက်
နောက်တစ်ခု: Straw & Wood Crusher
Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner
နိဒါန်းအဆိုပါ Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက်ကဘာလဲ? Groove Type Composting Turner Machine သည်အေရိုးဗစ်အချဉ်ဖောက်စက်နှင့်ဆွေးလှည့်ကိရိယာများတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် groove ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း၊ လမ်းလျှောက်ရန်လမ်းကြောင်း၊ ပါဝါစုဆောင်းခြင်းကိရိယာ၊ အလှည့်အပြောင်းနှင့်လွှဲပြောင်းကိရိယာ (အဓိကအားဖြင့် Multi-tank အလုပ်များတွင်အသုံးပြုသည်) တို့ပါ ၀ င်သည်။ အလုပ်နေရာ ...
နိဒါန်း Horizontal ဓာတ်မြေသြဇာရောနှောစက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Horizontal Fertilizer ရောနှောစက်တွင်ဗဟိုရိုးတံရှိပြီးဓါးသွားများပါ ၀ င်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပတ်ထားသည့်သတ္တုဖဲကြိုးများနှင့်တူသည်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများသို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီး၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးရောနှောနေခြင်းကိုသေချာစေသည်။ ..
နိဒါန်း Forklift အမျိုးအစားဆွေးပစ္စည်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Forklift အမျိုးအစားဆွေးပစ္စည်းသည်အလှည့်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ရောနှောခြင်းတို့ကိုစုဆောင်းပေးသောလေးခုပါ ၀ င်သည့် multi-functional ဖြစ်စေလှည့်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလေထုနှင့်အလုပ်ရုံများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ...
နိဒါန်းဟိုက်ဒရောလစ်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုတူးဖော်သည့်စက်သည်အဘယ်နည်း။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၏အားသာချက်များကိုဟိုက်ဒရောလစ်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်စက်လှည့်စက်သည်စက်၏အားသာချက်များကိုစုပ်ယူသည်။ ဒါဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာဇီဝနည်းပညာ၏သုတေသနရလဒ်များကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများစက်မှု, လျှပ်စစ်နှင့် hydrauli ပေါင်းစပ် ...
နိဒါန်းဒေါင်လိုက်ဓာတ်မြေသြဇာရောနှောစက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဒေါင်လိုက်ဓာတ်မြေသြဇာရောနှောစက်သည်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရောစပ်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းတွင်ရောနှောနေသောဆလင်ဒါ၊ ဘောင်၊ မော်တာ၊ လျှော့ချစက်၊ လည်ပတ်လက်မောင်း၊
နိဒါန်းရော်ဘာခါးပတ်သယ်ယူစက်ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။ ရော်ဘာခါးပတ်သယ်ယူစက်ကိုကုန်စည်များကိုဆိပ်ခံတံတားနှင့်ဂိုဒေါင်အတွင်းထုပ်ပိုးခြင်း၊ တင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊ ရော်ဘာခါးပတ်သယ်ယူစက်သည်လည်းသင့်လျော်သည်။
WuLong စက်မှုဥယျာဉ်၊ Xingyang ခရိုင်၊ Zhengzhou City, Henan ပြည်နယ်, တရုတ်